Ala ọma jijiji siri ike wakporo Bali, gbuo mmadụ 3 wee merụọ 7 ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Ala ọma jijiji siri ike wakporo Bali, gbuo mmadụ 3 wee merụọ 7 ahụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Resorts • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ala ọma jijiji siri ike wakporo Bali, gbuo mmadụ 3 wee merụọ 7 ahụ.
Dịkarịa ala, mmadụ atọ anwụọla ma mmadụ asaa ọzọ merụrụ ahụ n'ihi ala ọma jijiji ahụ mere na 'Island of Gods' nke Indonesia.
Ala ọma jijiji ruru 4.8 wakporo agwaetiti Bali nke ndị njem nlegharị anya Indonesia obere oge tupu chi abọọ na Satọde.
Ala ọma jijiji a kacha nwee na mpaghara Karangasem na Bangli n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ.
Ala ọma jijiji mbụ nke Bali sochiri oke ala ọma jijiji 4.3.
Ala ọma jijiji dị 4.8 mere IndonesiaAgwaetiti paradaịs ndị njem nlegharị anya nke Bali tupu chi abọọ taa.
Ala ọma jijiji a kacha nwee na mpaghara Karangasem na Bangli n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ, nke mere ka ndị mmadụ jiri ụjọ gbapụ n'ụlọ ha.
US Geological Survey tinyere oke ala ọma jijiji ahụ na 4.8, na -ekwu na ebe etiti ya dị kilomita 62 (kilomita 38.5) n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ọdụ ụgbọ mmiri Singaraja na omimi nke kilomita 10. Ala ọma jijiji mbụ mere mgbe ala ọma jijiji ahụ ruru 4.3.
Dịkarịa ala, mmadụ atọ anwụọla ma mmadụ asaa merụrụ ahụ n'ihi ala ọma jijiji ahụ.
E liri abụọ n'ime ndị ahụ e gburu n'okpuru ala mbuze na-ama jijiji, ihe ọzọ merụrụ ahụ, nwa agbọghọ dị afọ atọ, bụ ihe iberibe dara. Ndị merụrụ ahụ merụrụ ahụ nke ukwuu mgbaji ụkwụ na ọnya isi, ndị ọchịchị ime obodo kwuru, na -agbakwụnye na ha ka na -anakọta data gbasara ọnwụ na mbibi.
Bali, nke a na-akpọkarị 'Agwaetiti nke Chi dị iche iche', naanị mepere ndị njem mba ofesi n'isi izu a ka ọnwa iri na asatọ gachara iji kwụsị mgbasa COVID-18. Agbanyeghị, a na -atụ anya na ndị ọbịa si mba ofesi ga -ebubata n'agwaetiti ahụ n'ọnwa na -abịa ebe ụgbọ elu mba ofesi amalitebeghị.
Indonesia bụ nnukwu agwaetiti, nke dị na nke a na-akpọ 'Ring of Fire'-ọkụ nke ugwu mgbawa na ahịrị njehie na Oke Osimiri Pasifik-yabụ ala ọma jijiji na mgbawa bụ ihe a na-ahụkarị maka mba nde 270.
Ala ọma jijiji ikpeazụ mere na mba ahụ na Jenụwarị. O nwere nha 6.2 ma bute ọnwụ opekata mpe 105 yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6,500 merụrụ ahụ.
Ngwaahịa Pelican nke Platinum Equity ga -enweta
Thailand, Germany, Canada na -ekerịta njem nlegharị anya ọhụrụ ...
Ndị ọkachamara na-egosi Athens ụzọ ọhụrụ iji mee azụmahịa
Onweghi onye lanarịrị n'ihe mberede ụgbọelu An-12 na Russia...
Harley-Davidson meriri nnukwu mmeri
A kwadoro ihe nkedo chemical maka ndị na-edina n'ike ugboro ugboro na...
Kitts & Nevis kwadoro ule Antigen maka ...
Nkà Asia na-agbanye ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ
Mee mmemme obi ụtọ na St. Regis San Francisco
CDC nyere ntuziaka ngwa ngwa na Pfizer ma ọ bụ Moderna…
Paradise Sun Hotel na-ekwu na Seychelles Sustainable...
Flightsgbọ elu si Almaty na New Delhi na Air Astana ugbu a
IMEX America: Ọ dị mma ịlaghachi!
Ndị nledo nabatara ugbu a na UNWTO General Assembly na ...
Ụbọchị Mba Ndị Dị n'Otu: Oge Ememme na Ime Ọcha
Azụmahịa njem ga-etinyekwu ego na teknụzụ n'afọ ọzọ
Onye isi oche ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Africa na Senegal na…
Facebook: Kedu aha?
Onye isi oche bọọdụ njem nlegharị anya Afrịka na-eti mkpu maka...
Nzukọ Beijing-Tokyo nke iri na asaa. Imekọ ihe ọnụ dijitalụ ọhụrụ...